Lokhu kuzokwenza kunazo nakanjani kabili njengomnikelo usuku mlando! Cishe lena yiyona kakhulu Famous and Historical zemininingwane Imizila kanye isitimela romantic umzila emhlabeni. Isuka kusukela Paris eya edolobheni WaseByzantium Istanbul. Ungase ngu ithikithi ejwayelekile kusukela SaveATrain ukuhamba kulo mzila, noma ukhethe inketho bubuhle kakhulu futhi hop phezu Orient Express. I nozungu kwalesi sitimela okunethezeka ukuthi adumileyo aphefumulelwe Agatha Christie. Kulezi zinsuku ayisekho nokusebenza ku ifomu yayo yasekuqaleni kodwa umoya walo iphila e Belmond sika Venice-Simplon Orient Express. Kukhona izitimela ezimbili, Empeleni, eyodwa nge namakalishi yangekhulu 1920 futhi 30s kanti omunye mlando saseBrithani Pullman isitimela.
#abadumile #FamousTrains #HistoricTrains europetravel longtrainjourneys TrainStation amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi